Isdhexgal: Sidee Suuqyayaashu Ugu Kordhinayaan Warbaahinta La Leeyahay Lacagta iyo Kuwa Lacagta Lagu Bixiyo Iyadoo La Leeyahay | Martech Zone
Isdhexgal: Sidee Suuqyayaashu Ugu Kordhinayaan Warbaahinta La Leeyahay Lacagta iyo Kuwa Lacagta Bixiya ee leh Kuwa leh
Isniin, Disembar 18, 2017 Talaado, Janaayo 12, 2021 John Koetsier
Daaweynta suuqgeynta lacag bixinta iyo suuqgeynta ay leeyihiin si gooni gooni ah waxay u qiimeysaa suuqleyda beddelaad, darajo iyo dakhli. Inta badan suuqleydu waxay u qiimeeyaan kanaalada si gooni gooni ah, ama, kala qeybiya lacag bixin, kasbasho, iyo suuq geyn.
Waxaad kaga tageysaa miiskaaga 50-100% natiijooyinkaaga suurtagalka ah.
Waxaan dhawaan weydiiyay ku dhowaad boqol CMOs iyo maamulayaasha suuqgeynta: Sidee ayey saameyn ku yeelanayaan suuq geynta iyo bixinta suuqyada isuna weyneeyaan? Kuwa ay jawaabaha waxay ahaayeen kuwo fajaciso leh oo caqli gal ah, waxayna bixiyaan cadeymo xoogan oo ah in suuqleyda ay raadsadaan oo ay ka faa'iideystaan ​​isdhaafsiga ma ahan kaliya gudaha laakiin dhamaan inta udhaxeysa dhamaan suuqyadooda suuqgeynta.
Bulshadu waa tusaale muuqda.
Noocyada badankood waxay cabaan juice bulsheed oo waxyar la bixiyo. Laakiin qaar ka mid ah suuqleyda waxay ogaadaan in faa'iidooyinku ay si fiican uga sii gudbaan natiijooyinka ka wanaagsan ee warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan, laga yaabee… suuqgeynta raadinta dabiiciga ah.
Waxaan bilownay olole xayeysiis ah oo Facebook ah si aan kor ugu qaadno bixinta lacag-la'aanta safarka. Tani waxay dhalisay kumanaan jecel, wadaag, fariimo qoraal ah iyo ilaa 50 iskuxir soo gal oo laga helo baloogyada safarka. Raadintayada raadinta dabiiciga ah waxay soo hagaagtay 35% muddo dhowr bilood ah maxaa yeelay saamiyada bulshada iyo xiriiriyeyaasha soo gala ayaa ah qodobbada ugu waaweyn ee ku jira algorithm-ka Google. Amine Rahal, aasaasaha iyo agaasimaha guud ee 'Little Dragon Media'
Si kale haddii loo dhigo, bulshada oo lacag la siiyay waxay u horseedday bulsho kasbatay taasoo horseed u noqotay SEO kasbatay taasoo keentay horseedka taraafikada webka.
Taasi waa silsilad wanaagsan oo sabab ah, haddii aad tahay suuq wax ku iibiya miisaaniyad kooban.
Tusaale kale? Bixi-gujin-ku-dhigga SEO-ga dabiiciga ah.
Xaqiiqda ah inaad ku wado taraafikada dheeraadka ah guryahaaga internetka waxay leedahay saameyn guud oo wanaagsan:
Celcelis ahaan, waxaan aragnay 10 ilaa 20% kor u qaadista taraafikada raadinta dabiiciga ee ereyada muhiimka ah iyo weedhaha halka xayeysiinta sidoo kale la dhigo, gaar ahaan agagaarka raadinta calaamadeysan. Xayaysiisyadaas sidoo kale waa kuwo aad u jaban oo si fiican u shaqeeya, maadaama ay caadi ahaan yihiin qiimo jaban. Kent Lewis, aasaasaha iyo Madaxweynaha Anvil
Maxay tani u shaqaysaa?
Laura Simis oo ka tirsan Coalmarch waxay sheegaysaa in maadaama taraafikada boggu ay tahay qodob ka mid ah darajaynta natiijada natiijada mashiinka raadinta, kor u qaadista taraafikada bog gaar ah iyadoo la adeegsanayo warbaahinta lacagta la siinayo waxay hagaajin kartaa awoodda boggaas si uu si fiican ugu kala sarreeyo.
Marka, wiish noocee ah ayaad ka soo saari kartaa farsamadan isku dhafka SEM iyo PPC? Suuqleyda aan daraaseeyay waxay yiraahdeen natiijooyinkooda waxay udhaxeeyaan 10 ilaa 40% wiish. Taasi ma noqon karto mid dhulka burburisa… laakiin asal ahaan waa bilaash.
Mid ka mid ah tusaale ahaan runtii xiiso leh: SEO-ga dabiiciga ah iyo xayeysiinta wax iibsiga ee Google.
Midkani wuxuu dhaliyay koror ballaaran oo 7X ah oo xagga dakhliga ah hal suuqle.
Alison Garrison, oo ah agaasime sare ee suuqgaynta Halqabsi, oo ah barxad ecommerce ah oo loogu talagalay SMBs, waxay aragtay 12 bilood oo dheer oo ah qiimeynta mashiinka raadinta dabiici ah oo ku dhufatay lacag bixinta markii ay ku dartay xayeysiinta Google Shopping.
Ka dib markii la bilaabay ololaha quudinta ee Dukaameysiga, shaqada SEO ee socotay muddo hal sano ah ayaa heshay culeys weyn, iyo taraafikada raadinta dabiiciga waxay kordhisay 325% guud ahaan iyo in ka badan 400% moobiilka oo keliya sanadkiiba. Alison Garrison
Laakiin dakhliga ayaa gebi ahaanba ka booday saqafka sidoo kale… oo ay ku jiraan dakhliga raadinta dabiiciga ah.
Dakhliga ka soo baxa raadinta dabiiciga ayaa kordhay 240% mudadaas. Xayeysiinta xayeysiinta dukaamaysiga ayaa fure u ahaa guusha halkan - guud ahaan taraafikada waxaa ku kordhay in ka badan 2,500%, taraafikada mobilada ayaa ku kordhay in ka badan 10,000%, dakhliga ayaa ku kordhay in ka badan 800%, dakhliga mobilada ayaa ku kordhay in ka badan 80,000% - ma ahan nooc qoraal ah.
Sida iska cad, macmiilkeedu wuxuu ka bilaabanayay saldhig yar oo ka tirsan webka iyo dakhliga moobiilka. Iyo, waxaa jira laba digniin oo kale oo muhiim ah. Mid ka mid ah: waxay maalgashatay sanad dhan ku habboon injineernimada raadinta. Taasi waa dadaal iyo dadaal - iyo aragti fog - oo aadan inta badan arag. Iyo laba: masaafadaadu way kala duwanaan kartaa. Sababtoo ah hal suuqleydu waxay higsanayaan dayaxa oo ay garaacaan xiddigaha micnaheedu maahan in suuq kasta uu gaaro natiijooyin isku mid ah.
Weli, natiijooyinka ayaa ah kuwo cajiib ah.
Iyo, uguyaraan, natiijooyinka Garrison waxay cadeynayaan baahida loo qabo iswaafajinta kanaalka suuqgeynta. Suuqleyda aan raadineynin ugana faa'iideysan isdhaafsiga u dhexeeya kanaallada suuq-geynta lacag bixinta iyo dabiiciga ah ayaa ka maqan dahab saafi ah.
Daraasad buuxda oo ay la socdaan fikradaha dhammaan suuqleyda aan la hadlay waxaa lagu heli karaa halkan bilaash.
Halkan Ka Degso Daraasadda oo Dhamaystiran
Tags: Alison Garrisongarissa allisonanvildhuxulKent Lewislaura simismarketingkanaalada suuqgeyntaomnichannelwarbaahinta dabiiciga ahraadinta dabiiciga ahseo dabiici ahwarbaahintu leedahaywarbaahinta lacag la siiyayraadinta lacagta lehppcmurugo
Daacadda Brand Ma Dhabaa Miyaa? Mise Macaamiil baa Daacad u ah?